Moments leh saaxiibo 15
Ma ii sheegi kartaa dabeecada dabka ama dabka? Marwalba waxay u muuqatay wax la yaab leh. Ma heli karo macluumaad ku filan oo ku saabsan buugaagta sayniska.
Dabku waa ruuxa ololka. Ololku waa jirka dabka.
Dabku waa firfircoonida firfircoonaanta wadista ee jirka oo dhan. Iyadoo aan lahayn dab dhammaan jidhka oo dhan waa la hagaajin karaa - oo aan macquul ahayn. Dabku waa wixii ku dhaca xubin kasta oo ku kalifaysa walxaha jirka inay is beddelaan. Ragga gudaheeda, dabku wuxuu u shaqeeyaa siyaabo kala duwan. Qaybta dabka ayaa galeysa neefta iyo dhiigga. Waxay gubtaa unugyada wasakhda ah ee uu dhiigga qaadayo isla markaana laga saaro marinnada xayawaanka ah, sida daloolada, sambabbada iyo xiidmaha xiidmaha. Dabka wuxuu keenaa astral, molikula, jirka jirka oo isbeddela. Isbeddelkan joogtada ah wuxuu kuleylka jirka kuleyliyaa. Dabka iyo oksijiinta, jirka guud ee uu dabku muujiyaa, wuxuu kiciyaa damacyada, isagoo sababaya kacsanaan iyo xanaaq, kuwaasoo gubaya jirka astralka una adeegsada xoogga dareemaha. Ficilka noocan oo kale ah ee dabku waa mid aasaasi ah oo u kuur gala dareen dabiici ah.
Waxaa jira dab kale, oo qaar loo yaqaan qaar dabka dabka dhaliya. Dabka dhabta ah ee alkolojiitikku waa dabka maskaxda ku fikira, kaas oo diida dabka aasaasiga ah iyo kontaroolada kuna qasbaya inay la jaan qaadaan naqshadda caqliga leh sida maskaxda go'aamisa; halka, markii ay dadku xakameyn waayaan, dabka aasaasiga ah ee damaca, damaca iyo xanaaqa, ay xukumaan maanka guud, taas oo ah maskaxda dabeecadda, oo aan si gaar ah loo gaarin — waxaa lagu magacaabaa Ilaah, dabeecadda, ama Ilaah wuxuu dabiicadda ku dhex sameeyaa. Nin, maskax ahaan, ku shaqaynta dababka asaasiga ah kuna qasbay inay la jaanqaadaan naqshadeynta caqliga leh, waxay u horseedaa inay galaan isugeyn cusub iyo natiijada isku-darka dabka aasaasiga ah ayaa loo maleynayaa. Adigoo ka fikiraya fikirka iyo fekerka dabka jirka iyo sheyga aasaasiga ah waxaa lagu siiyaa qaab adduunka aan la arki karin. Noocyadan fikradeed ee adduunyada aan la arki karin waxay ku qasbaan arrin guud in ay is waafaqaan qaababka.
Qaar ka mid astaamaha dabka iyo ololku waa in ay kulul yihiin, oo aan waligood isla daqiiqaddii isku sii ahaaneyn, in ay ka duwan yihiin wax kasta oo aan ognahay, in ay nal bixiyaan, in ay qiiq soo saaraan, in ay beddelaan qaab adoo u yaraynaya dambas, in ololka, jirkiisa, dabku u muuqdo si lama filaan ah markay baaba'aan, in ay had iyo goor kor u baxaan oo la tilmaamo. Dabka aan aragno waa xaaladda uu ruuxa jirka, oo lagu haysto addoonsiga arrimo culus, waa la xoreeyay oo wuxuu dib ugu laabanayaa xaaladdiisii ​​aasaasiga ahayd. Diyaaraddeeda, adduunkeeda, dabku waa xor oo waa firfircoon yahay, laakiin inta lagu gudajiro muujinta iyadoo lagu qasbo ficilka dabka waa la dhimay oo la xakameeyaa ugu dambeyntiina waxaa lagu hayaa maydkiisa taas oo ah ruuxa, waayo dabku waa ruux ee jirka oo dhan. Dabka ku xirnaa arrinta muhiimka ah waxaan u yeeri karnaa dab qarsoon. Dabkan dabacsan ayaa ku jira dhammaan boqortooyooyinka dabiiciga. Dabka dambe, wuxuu si firfircoon ugu firfircoon yahay waaxyada boqortooyooyinka qaarkood marka loo eego waaxaha kale ee isla boqortooyada. Tan waxaa lagu muujiyaa duufaanta iyo baaruudda ku jirta macdanta, alwaaxda adag iyo caws ku jirta boqortooyada khudradda iyo dufanka iyo maqaarka jirka xoolaha. Dabka dabacsan ayaa waliba ku jira dareeraha qaar, sida saliida. Jirka wax u nugul ayaa u baahan joogitaanka kaliya dabka firfircoon si loo kicinayo oo ka sii daayo nambarkiisa xabsiga. Sida ugu dhakhsaha badan ee meesha laga saaray, dabka dabacsan wuxuu u muuqdaa xoogaa daqiiqad ah, ka dibna wuxuu u gudbaa dunida aan la arki karin ee uu ka yimid.
Dabka waa mid ka mid ah afarta shey ee loo yaqaan dhammaan sixir-falayaasha. Dabku waa shayga ugu badan ee walxaha. Mid ka mid ah walxaha loo yaqaan dabka, hawada, biyaha iyo dhulka kuma eka isha, marka laga reebo kuwa ugu daran xaaladdaas. Sidaa daraadeed waxaan aragnaa kaliya wajiyada ugu hooseeya ama dhinacyada waxyaabaha aan sida caadiga ah uga hadalno dhulka, biyaha, hawada iyo dabka. Mid kasta oo ka mid ah afarta shey ayaa lama huraan u ah dhismaha sheyga jirka, mid walbana wuxuu matalaa xiriir la leh midba midka kale. Maaddaama qayb kasta oo maaddada jirka ah ay afarta cunsur isku urursato qeybo gaar ah, mid kasta oo ka mid ah afarta cunsur waxaa dib loogu celiyaa xaaladdii aasaasiga ahayd isla marka isku darka la jebiyo. Dabka waa waxa sida caadiga ah jabiya isku-darka oo sababa walxaha galay isku-darka inay dib ugu noqdaan goboladoodii asalka ahaa. Marka dabka la demiyo, oo ay tahay waxa ugu weyn ee xubnaha guban kara, waxay umuuqataa inay si fudud dhaaftay. Markii ay dhinto waxay sidoo kale sababeysaa walxaha hawada, biyaha iyo dhulka inay ku noqdaan ilaha dhowr. Hawada iyo biyaha soo noqonaya ayaa lagu arkaa qiiqa. Qiiqaas qiiqa oo hawo ah, oo sida caadiga ah lagu arko qiiqa qiiqa, ayaa markiiba noqda mid aan muuqan. Qiiqaas qiiqa oo ah biyo wuxuu kusoo noqdaa biyaha aasaasiga ah ee qoyaanka, sidoo kale hawada ayuu ku xayiray, oo noqda mid aan muuqan. Qaybta kaliya ee hartay waa qaybta ugu weyn ee dhulka element, kaas oo ku jira saxanka iyo dambas. Marka laga soo tago dabka qarsoon waxaa jira dab kiimikaad taas oo lagu muujiyo ficil-goynta ah ee kiimikooyinka qaarkood ay la xiriiraan kiimikooyin kale, ogsijiinku dhiigga soo nuugo, iyo waxyaalaha macaan ee sababa dheefshiidka cuntada. Kadibna waxaa jira dabka kiimikada ee dhaliya fikirka. Ficilka dabka kiimikada ee fikirka wuxuu sababayaa in rabitaanka guud lagu beddelo hab rabitaan sare leh, oo mar labaad lagu nadiifiyo oo loo rogo himilooyinka ruuxiga ah, dhammaantoodna waxay ku xiran yihiin dabka alchemical ee fikirka. Dabadeedna waxaa jira dab xagga ruuxa ah oo yareyn kara dhammaan ficilada iyo fikradaha oo dhan xagga aqoonta isla markaana dhisaya jidh ruuxi ah oo aan dhiman karin, oo laga yaabo inuu u muujiyo jidhka dabeed ruuxi ah.
Waa maxay sababaha isu-imaatinka weyn, sida dabka prairie iyo dababka oo umuuqda inay isku mar ka yimaadaan qaybo kala duwan oo magaalada ah, iyo waa maxay gubashada iskood u dhaca.
Waxaa jira waxyaabo badan oo keenaya in la iswaafajiyo, laakiin sababahan oo badan ayaa lagu matalaa sababta ugu dhakhsaha badan ee isuduwaha, taasoo ah jiritaanka sheyga dabka ka hor inta ololku muuqan. Waa in la fahmaa in dabku yahay shey awood u leeyahay inuu ku biiro waxyaabaha kale, diyaaradda dabka, ama diyaaradaha kale. Isku darka qaybaha kala duwan waxaan helnaa natiijooyin qeexan. Marka sheyga dabku joogo xoog weyn wuxuu xakameynayaa waxyaabaha kale ee jira wuxuuna ku qasbayaa inuu gubto jiritaankiisa xoogga badan. Jiritaanka sheyga dab-damiska wuxuu dabka ka dhex qaadaa xubnaha jaarka ah iyadoo ololka ku-meelgaarka ah lagu xiro walxaha dab-demiska ee kuxiran asalkiisii ​​hore. Ololka dabka ka booda waxaa adeegsada dabka kaas oo u jiidaya inuu adduunka galo ololka. Markasta oo sheyga dabku uu ku badan yahay jawiga si ku filan ayuu wax uga qabtaa dhammaan waxyaalaha guban kara; Markaas cadhada kulul ee sida xanaaqa, arrintani waxay u soo baxeysaa olol. Firxadka ama dabka kaymaha waxaa ka dhalan kara dabka socdaalka, ama fallaaraha qorrax dhaca, iyo damin-la'aanta ayaa sababi kara gubida magaalo weyn, hase yeeshe kuwan maahan sababta ugu weyn markasta. Mid ayaa had iyo goor ogaan kara in dadaalka loogu jiro in dab lagu dhiso xaalado aad u wanaagsan ayaa inta badan waxaa ku xigta guuldarro guud, halka, tuurista kubbad la ordayo oo iftiin leh la soo saaro, ama dabaqa hoose ee dhisme weyn oo aan wax muuqan xaadirkan oo si dhib yar u gubi kara, laakiin dabka waxaa xakameeyay birta dhalaalaysa oo si dhakhso leh ayuu ugu faafay si ay gubtay dhisme dhan dhulka ku yaal, si kastaba ha noqotee dadaallada badan ayaa laga yaabaa inay badbaadiyaan. Is-afgaranwaaga oo cunay magaalooyin waaweyn ayaa ugu horreyn sabab u ah joogitaanka dab-damiska kiis kasta oo noocaas oo kale ah, si kasta ha noqotee waxaa sababi kara waxyaabo kale oo badan.
Gubashada lafdhabarta ayaa la sheegay inay tahay mid si dhakhso leh isugu mideysa walxaha guban kara ogsajiinta. Laakiin sababta ayaa ugu horreyntii sabab u ah diyaarinta shay isku khilaafsan oo soo jiidata sheyga dab-damiska. Markaa, isku dhaca u dhexeeya laba shay oo guban kara, sida saliida iyo feeraha, ayaa waxaa ku xiga si lama filaan ah arrinta ugu biirta oksajiinka hawada ku jira; Tani waxay kadhigtaa shey-dabeed, oo ku bilaabeysa walxaha olol.
Sidee baa birahaas loo yaqaan 'dahab, copper' iyo 'silver'?
Waxaa jira birta, oo mararka qaarkood loo yaqaanno biraha xurmada leh. Mid kasta oo ka mid ah kuwan waa xoog la xukumay oo la xidhay, iftiin ama tayo ka soo baxda mid ka mid ah toddobada jir ee iftiinka oo aan ku aragno meel bannaan oo loo yaqaanno meerayaasha. Xoogga, ama iftiinka, ama tayada mid kasta oo ka mid ah kuwa aan u naqaanno meerayaasha waxaa soo jiidatay dhulka dayaxa. Ciidamadaani waa nool yihiin waxaana loo yaqaannaa astaamaha asaasiga ah ee walxaha ama meerayaasha. Dhulku iyo dayaxu wuxuu siiyaa jir iyo qaab ay u sameystaan ciidamada asaasiga ah. Biraha waxay matalaan toddobada marxaladood ama darajo taas oo ay tahay in ciidamada asaasiga ahi ay ku gudbaan boqortooyada macdanta kahor inta aysan yeelan awood gaar ah ayna u gudbaan boqortooyooyinka sare ee dabeecadda jirka. Waxaa jira adeegsiyo badan oo toddobada biraha lagu dhejin karo. Daaweynta waxaa laga yaabaa in la sameeyo oo cudurrada ay keenaan isticmaalka ama si xun u isticmaalidda birta. Biraha waxay leeyihiin awood siinta nolosha iyo waliba tayada astaamaha dhimashada. Midkoodna waa la eryi karaa, miyir ama miyir la ', marka xaaladaha qaarkood ay adkaadaan. Waxay noqon laheyd wax caqli gal ah in la bixiyo amarka horukaca biraha iyo wanaaggooda u dhigma, in kasta oo aan xaqiiqda gacanta ku hayno, maxaa yeelay, iyadoo ay jirto horuumar isdaba joog ah oo ka socda dowlad-goboleed illaa dowlad-goboleedyo xoogagga aasaasiga ah ee ka shaqeynaya biraha, amarkan oo loo isticmaali karin dadka oo dhan si isku mid ah; waxa lagu dabaqi lahaa faa'iidada mid ayaa musiibo ku noqon doonta mid kale. Qof kastaa, in kasta oo loo dhisay si isku mid ah, haddana wuxuu ka kooban yahay sifooyinkiisa qaarkood oo u dhigma waxyaalaha aasaasiga ah ee biraha; qaar ka mid ah kuwan waa kuwo faa'iido leh, qaar kalena waa kuwo aan dabiici ahayn. Guud ahaan marka laga hadlayo, si kastaba ha noqotee, dahabku wuxuu u taagan yahay heerka ugu sarreeya ee ka dhexeeya biraha. Toddobada macdanta ee lagu tilmaamo waa bir, dahab, meerkur, naxaas, qalin macdanta qalin ah iyo bir. Xisaabaadkaan looma qaadin inuu yahay amarka horukaca, ama gadaal.
Macdanta birta ee sida caadiga loo isticmaalo da’da hore ma aha kuwa ugu badan ee xilligan la joogo. Dahabka waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin kuwa ugu qiimaha badan toddobada macdanta, in kastoo aysan ahayn tan ugu waxtarka badan. Waxaan si sahlan uga faa’iideysan karnaa dahabka maanta marka loo fiiriyo sida aan birta u awoodno. Birta, birta ayaa ah tan ugu muhiimsan ilbaxnimadeena, maadaama ay gasho dhammaan marxaladaha nolosha warshadaha, sida dhismayaasha qaabdhismeedka sare, howlaha dhismaha iyo isticmaalka uumiga, jidadka tareemada, matoorrada, qalabka, maacuunta guryaha iyo alaabada guriga . Waxaa loo isticmaalaa ujeeddooyin qurxin, waana wax qiimo leh oo muhiim u ah daawada. Ilbaxnimada kale waxay soo martay muddooyinkooda kala duwan, oo loo yaqaan dahabka, naxaasta qalin (ama naxaas ah) iyo da'da birta. Dadka dhulka deggan, guud ahaan marka la hadlayo, waxay ku jiraan da'da birta. Waa da 'adag oo dhaqso wax uga beddeleysa kuwa kale. Waxa aan hadda sameyno waxay noo saameyn doonaan si ka wanaagsan sidii hore da 'kastoo kale maxaa yeelay arrimahu si dhaqso leh ayeey ugaga baxaan da'da birta marka loo fiiriyo kuwa kale. Sababaha ayaa la raacaya cawaaqibkooda si dhakhso leh oo bir ah marka loo eego da 'kasta oo kale. Sababaha aan hadda dejinnay waxay u gudbi doonaan da'da soo socota. Da'da soo socota waa da'da dahabiga ah. Ameerika dhexdeeda, halkaas oo tartan cusub uu ka socdo, horay ayaan u galnay.
Toddobada biraha halkan lagu soo qornaa waxay ka mid yihiin toddobadii arrimood ee udgoon ee ay soo dhejiyeen oo ay curyaamiyeen sayniska casriga ah. Marka laga hadlayo sida ay u samaysan yihiin waxaan u sheegnay in xoogaga, nalalka, ama tayada ka soo baxa toddobada mayd ee meel bannaan, oo loo yaqaanno meerayaasha, ay soo jiidato dhulka. Dhulku wuxuu abuuraa soo jiidashada birlabka iyo, iyadoo ay ugu wacan tahay duruufaha jira, waxaa jira xooggas kuwaas oo si tartiib tartiib ah u dhismaya, kuna sameysma walxaha ka sameysan suunka birlabka oo soo jiidanaya xoogga. Mid kasta oo ka mid ah toddobada ciidan waxaa lagu yaqaanaa midabkiisa iyo tayadiisa gaarka ah iyo qaabka ay walxuhu isugu wada jiraan. Waqtiga ay ku qaadaneyso sameynta qofkasta birta waxay kuxirantahay duruufaha jira, maadaama dahab laga soo saari karo waqti aad u yar markii dhamaan shuruudihii laga rabay ay joogaan.